Nnwom 40 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Aseda a wɔde ma Onyankopɔn a obiara ne no nsɛ no
Onyankopɔn nnwuma dɔɔso paa (5)
Ɛnyɛ afɔre kɛkɛ na Onyankopɔn ani gye ho (6)
“Nea mepɛ ne sɛ mɛyɛ w’apɛde” (8)
Wɔde ma dwom kyerɛfo. Dawid dwom. 40 Mede me werɛ nyinaa hyɛɛ Yehowa mu,*Na otiee me,* na ɔyɛɛ aso maa me sufrɛ.+ 2 Oyii me fii amoa a emu nsu rebu fa soNe atɛkyɛ kyakaa mu. Na ɔde me nan sii ɔbotan so;Ɔmaa me nan timii. 3 Afei ɔmaa me dwom foforo;+Metoo ayeyi dwom maa yɛn Nyankopɔn. Nnipa pii behu nea Onyankopɔn ayɛ na wɔasuro,Na wɔde wɔn ho bɛto Yehowa so. 4 Anigye ne ɔbarima a ɔde ne ho to Yehowa soNa onni asobrakyefo ne nkontompofo* akyi. 5 O Yehowa me Nyankopɔn,Nneɛma a woayɛ ama yɛn dɔɔso;W’anwonwadwuma ne adwene a woadwen wɔ yɛn ho.+ Obiara ne wo nsɛ;+Sɛ mise mereka ho asɛm na makyerɛkyerɛ mu a,Anka merenwie, efisɛ ɛdɔɔso dodo.+ 6 W’ani annye afɔre ne ayɛyɛde ho,*+Nanso wubuee m’aso ma metee wo nsɛm ase.+ Woammisa ɔhyew afɔre ne bɔne ho afɔre.+ 7 Ɛnna mekae sɛ: “Hwɛ, maba. Wɔakyerɛw me ho asɛm wɔ nhoma mmobɔwee no mu.+ 8 O me Nyankopɔn, nea mepɛ* ne sɛ mɛyɛ w’apɛde,+Na wo mmara wɔ me koma mu tɔnn.+ 9 Meka trenee ho asɛmpa wɔ asafo kɛse mu.+ Hwɛ! Merentumi nka m’ano ntom,+O Yehowa, wunim saa. 10 Menkata wo trenee so wɔ me koma mu. Meka wo nokware ne wo nkwagye ho asɛm. Wo dɔ a enni huammɔ ne wo nokwaredi nso, memfa nhintaw wɔ asafo kɛse mu.”+ 11 O Yehowa, mfa wo mmɔborɔhunu nkame me. Ma wo dɔ a enni huammɔ ne wo nokwaredi mmɔ me ho ban daa.+ 12 Mmusu a atwa me ho ahyia no dɔɔso ara ma mintumi nkan.+ Me mfomso bebree bu fa me so ma minhu me kwan mu yiye;+Ɛdɔɔso sen me ti nwi,Na mapa abaw. 13 O Yehowa, mesrɛ wo, begye me.+ Yɛ ntɛm bɛboa me, O Yehowa.+ 14 Ma wɔn a wɔrepɛ me akum me* no nyinaaAni nwu na wɔmfɛre. Ma wɔn a wɔpɛ me sɛe noMfa aniwu nnan wɔn ho nguan. 15 Wɔn a wɔka kyerɛ me sɛ: “Ɔtwea! Ɔtwea!” no, Ma wɔn ho nnwiriw wɔn na wɔn ani nwu. 16 Wɔn a wɔhwehwɛ wo no de,+Ma wɔn ani nnye na wonni wo mu ahurusi.+ Da biara, ma wɔn a wɔn ani gye wo nkwagye nnwuma ho no nka sɛ: “Monkamfo Yehowa.”+ 17 Me de, meyɛ mmɔborɔwa ne ohiani.Ma Yehowa ntwa n’ani mmɛhwɛ me. Wone me boafo ne me Gyefo.+Me Nyankopɔn, ntwentwɛn wo nan ase.+
^ Anaa “Mede abotare twɛn Yehowa.”
^ Anaa “ɔbɔɔ ne mu ase tiee me.”
^ Anaa “atorofo.”
^ Anaa “Woampɛ afɔre ne ayɛyɛde.”
^ Anaa “nea m’ani gye ho.”